The Irrawaddy's Blog: ရခိုင်ဒေသအတွက် ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်မြို့မှ လူငယ် ၁၀၀ နီးပါးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ယနေ့ နံနက် ၁၁ ခွဲခန့်မှစတင်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာ နာရီဝက်ကြာကြောင်း တွေ့ရသည်။တောင်းဆိုချက်များထဲတွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များက ရခိုင်ဒေသခံများအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းမပြုရေး ဆိုသည့် အချက်လည်း ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ယူပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံများ - ဂျေပိုင်/ဧရာဝတီ)
ရခိုင်အရေးအတွက် သမ္မတကြီး၏ဆောင်ရွက်ချက်ကို လေးစားထောက်ခံပွဲများကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့ရွာအသီးသီးတွင် ကျင်းပကြဖို့ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Ministry of Commerce web site လုပ်ခံရပါတယ် လုပ်တဲ့အဖွဲ.ပြောထားပေမဲ့ခြင့်ချိန်ပြီးမှယုံကြပါ။နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
တောင်းဆိုချက်များထဲတွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များက ရခိုင်ဒေသခံများအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းမပြုရေး ဆိုသည့် အချက်လည်း ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။it´s so important for you irrawaddy to high light above facts. did they truly say and why you don´t high light the other demands?
~ မြွေဆိုးတွေ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဂူအမ်ကျွန်းကို အမေရိကန်စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်နေပါပြီ။ တရုတ်ခရီးမှာ ရန်ကုန်က ဝတ်သွားတဲ့အတိုင်း၂ ရက်တိတိ နေခဲ့ရသူများ